Kumira Wiricheya XO Series | Karman® XO Simba Simuka
musha / Chinyorwa Wiricheya / Kumira Wiricheya XO Series
Simba Kumira Wiricheya XO-505 Series
SCI Model Maitiro
Wiricheya Yakamira kubva kuKarman Healthcare chimiro cheiyo tekinoroji yehunyanzvi iyo inogona kubatsira kushandura hupenyu hwako. Inoratidzira an nyore kuwana mufaro-tsvimbo controller iyo inokubvumira iwe kudzora zvizere kufamba kwechigaro. Iyo zvakare inoratidzira kusimuka modhi, iyo inokutendera iwe kutyaira cheya uri panzvimbo yakamira.
Simba Kumira wiricheya inowanzo shandiswa kuitira kuwana zvakatipoteredza uye kumanikidza kumanikidzwa. Iwe unogona kudzora kumhanya kwechigaro kuburikidza neyakareruka kuwana mufaro-tsvimbo chidhiraivho, icho chakamiswa zvakakwana mukati mekusvikira kwechero mhando yemushandisi. Iwe unogona nyore kugadzirisa kureba kwemaoko kuitira kuti zvinyatsoenderana nezvaunoda.
Iwe unogona zvakare kugadzirisa backrest uye kunyange kuipeta pasi kuitira kuti uchengetedze zviri nyore mune chero mhando [huru] mota. Iwe unogona zvakare kudzora kona iyo sachigaro inokiya mukati neiyo joy-stick controller, iwe unogona kuigadzirisa iyo kubva pakugara modhi senge chero yakajairika wheelchair, kusvika munzira yekumira mode uye chero kupi pakati. Macheya aya zvakare ane edu epamusoro emutsetse Ndangariro furo chigaro pamakusheni, iyo inouya yakajairika neese anomira wiricheya.
Simuka-up wiricheya akateedzana akagadzirirwa nyaradzo nekusimba; idzi zvakare dzimwe nzira dzezvehupfumi kune mamwe mawiricheya anomira pamusika anogona kudhura anopfuura makumi ezviuru zvemadhora. Zvitima zvedu zvemawiricheya zvinopa mabhenefiti mazhinji ehutano, anosanganisira kuvandudzwa kwekufamba kweropa, itsvo uye kushanda kwedundira, pamwe nekuvandudzika kwetoni mhasuru. Kumira mawiricheya anofambiswa nemaviri (12v) mabhatiri ayo anogona kumhanya kwenguva yakareba yenguva, uye anogara kwenguva yakati wandei makumi maviri nemashanu mamaira.
Yakamira wiricheya ndeye CE Yakagamuchirwa / USA Patent: 7,097,189 B2
Akamira zvigaro zvakagadzirwa kubva ku6061 T-6 Ndege-giredhi Aluminium Furemu
Kumira mawiricheya anouya stock neflip-kumashure armrests w / yakajeka plexiglass padivi mapaneru
Yakawanda inodhura inomira-wiricheya mumusika
Kuwedzera kweKudzvinyirira Ruregerero Kuvandudzwa kwekushanda kunosvika kuti zvibatsire kutora chikamu muADL
Yakagadziridzwa Kutenderera, Ita kuti rusununguko uye negoho
Kuvandudzwa Kufema, Chengetedza yakakosha nhengo kugona, Deredza kuitika kwe UTI
Yakagadziridzwa Kuchinjika, Chengetedza pfupa remaminerari density, Kuvandudza kungoita renji kufamba
Kuvandudzwa Kusununguka kwe Dhinda, Deredza zvisina kujairika mhasuru toni uye kuzvimba, kumanikidza maronda
Deredza maronda ekumanikidza, maronda nekuremara kwepfungwa
Anoremedza Mamiriro Evanhu
Inobvumira Kwekureruka Kutaurirana
Inowedzera Yekuwana Chikamu
Yakagadziridzwa Hupenyu hweHupenyu
Inesarudzo Inomirira Anotungamira
Inesarudzo Tray Model / Dual Model
Inesarudzo Junior Model 14-chigaro upamhi
Yakagadziridzwa Hunhu, uye maModels matsva ari kuuya munguva pfupi iri muchikamu ichi kusanganisira kutsenhama nekutetereka!
Parizvino, pane gumi nematanhatu masisitimu uye mashanu Fomu II nzvimbo inotsigirwa neNational Institute on Disability and Rehabilitation Research, Hofisi yeDzidzo Dzidzo uye Rehabilitative Services, US department reDzidzo.
Iyo Spinal Cord Kukuvadza Model Systems Slide Show
Iyo Spinal Cord Kukuvadza Model Systems Masiraidhi (PDF vhezheni)
Nhoroondo ye MSKTC SCIMS Flyer
Model System Ruzivo Dudziro Center Webhusaiti
UAB Model Spinal Cord Kukuvara Kuchengeta System
Yunivhesiti yeAlabama kuBirmingham, Birmingham, AL
Maodzanyemba California Spinal Cord Kukuvadza Model System
Iyo Rocky Mountain Dunhu Spinal Kukuvara Sisitimu
Craig Chipatara, Englewood, CO
South Florida Spinal Cord Kukuvadza Model System
Yunivhesiti yeMiami, Miami, FL
Georgia Yenharaunda Spinal Cord Kukuvara Kuchengeta System
Mufudzi Center, Inc., Atlanta, GA
Midwest Regional Spinal Cord Kukuvara Kuchengeta System (MRSCIS)
Rehabilitation Institute yeChicago, Chicago, IL
Kentucky Regional Model Spinal Cord Kukuvadza Sisitimu
Kuvandudza Frazier, Louisville, KY
New England Regional Spinal Cord Inokuvadza Center Network
Chipatara cheGaylord, Wallingford, CT
Chipatara Che Special Care, New Britain, CT
Spaulding-Harvard Spinal Cord Kukuvadza Sisitimu
Spaulding Kuvandudza, Boston, MA
Yunivhesiti yeMichigan Model Spinal Cord Injury Kuchengetedza Sisitimu
Kuchamhembe kweNew Jersey Spinal Cord Injury System
Kessler Foundation Yekutsvagisa Center, West Orange, NJ
abotticella@kesslerfoundation.org Visit Website
Dunhu Spinal Cord Kukuvadza Center yeDelaware Valley
Thomas Jefferson Yunivhesiti, Philadelphia, PA
Yunivhesiti yePittsburgh Model Center paSpinal Cord Kukuvara
Northwest Regional Spinal Cord Kukuvadza Sisitimu
Yunivhesiti yeWashington, Seattle WA
Fomu II Nzvimbo
Aya masisitimu akambopihwa mari yeModel Systems uye anoramba achiunganidza data reForm II yekutevera. Vatsva vatori vechikamu havana kunyoreswa.
Santa Clara Valley Chiremba Center
Gomo reSinai Chikoro Chemishonga
Iyo Institute for Rehabilitation uye Tsvagiridzo (TIRR)
Dzidza Zvakawanda Nezve Zvigadzirwa >
Kutsvaga Iyo Yakafanira Wiricheya to FIT YAKO inokosha zvikuru. Ndokusaka isu takaparura nyowani ERGO FIT ™ Campaign yakavakirwa pazvakakodzera Wiricheya Ergonomics, uchienzanisa uye uchienzanisa zvese zviri zviviri zvinodiwa nemuviri wako, yako Mawiricheya Zviyero, uye zvakare kuenzanisa nharaunda yauchange uchinakidzwa newiricheya yako.
Kunyangwe iri kunze kwekushanya uye kuona kuti kukwira ramp ine hushoma huwandu hwekuramba, kana kuve wakasununguka sezvinobvira nekuda kwekushandisa kwenguva refu, yedu ERGO FIT ™ nzira inopa huwandu hwakawanda hwe sarudzo uye zvishongedzo, kana mamodheru ane akasiyana misiyano yakagadzirirwa kuwedzera kufamba kwako uye nyaradzo.
MACHITO - Chigadzirwa chega chega Chekumisikidza Peji chine ruzivo rwese rwakanangana nechigadzirwa (semuenzaniso HCPCS Makodhi, Zvidimbu, Zvinyorwa, UPC, nezvimwewo). Kana iwe uchida kuona chese chigadzirwa chakanyorwa nema specs uye ruzivo, ndapota shanyira yedu Zviwanikwa Landing peji nekudzvanya HERE. Tarisa yedu Kumhara Peji Dhairekitori.
Chii chinonzi Spinal Cord Kukuvara?
A musana kukuvara (SCI) inowanzo rondedzerwa sekukuvara kana kushungurudzika kumuzongoza izvo zvakakonzera kurasikirwa uye / kana kukanganisika basa zvichikonzera kuderedzwa kwekufamba uye / kana kunzwa.
Zvinowanzoitika zvikonzereso kumuzongoza ndezvekutambudzika (tsaona yemotokari / mudhudhudhu, pfuti, kudonha, kukuvara kwemitambo, nezvimwewo), kana chirwere (Transverse Myelitis, Polio, Spina Bifida, Friedreich's Ataxia, musana wetsinga, musana stenosis, nezvimwe. ). Uku kukuvara kumuzongoza kunozivikanwa se maronda, uye kuoma mitezo kunozivikanwa se quadriplegia kana kukuvara kuri mu cervical (mutsipa) dunhu, kana se paraplegia kana kukuvara kuri mu thoracal, lumbar kana sacral nharaunda.
The musana wemusana inowanzo kutaurwa kune alpha kuverenga, zvine chekuita nechikamu chakakanganiswa mumutsipa wepelinha, kureva, C7, T10, L3 nezvimwe.
Pazasi peiyo conus medullaris (L1-L2), musana wesipinha une hunyanzvi hwemitsipa inonzi cauda equina kana "bhiza-muswe". Iyi tsinga yemusana inokamura kubva kumucheto wezasi kwetambo remuzongoza uye ine mitsipa midzi kubva kuL1-5 uye S1-5. Kukuvadza kune idzi midzi midzi kunonzi cauda equina syndrome.
Izvo zvinoita kuti mumwe munhu atambure a mutsipa wakatyoka, kana a akatyoka musana pasina kuremara. Izvi zvinoitika kana paine kutsemuka kana kutsemuka kwema vertebrae, asi rwonzi rwesipinha haruna kukuvara.
Yakazara uye Isina Kukwana Spinal Cord Kukuvara
Iko kune kazhinji mhando mbiri dzezvipembere zvine chekuita nekukuvara kwemuzongoza, idzi dzinozivikanwa sekuzara kwemuzongoza nekukuvara kupera kwemutsipa usina kukwana. Rudzi rwakakwana rwekukuvara zvinoreva kuti munhu akaoma mitezo zvachose pasi pekukuvara kwavo. Kukuvara kusina kukwana, zvinoreva chete chikamu chemuzongoza chakakuvadzwa. Munhu ane kukuvara kusina kukwana anogona kuve nekunzwa pazasi pechironda chavo asi pasina kufamba, kana visa versa. Kune akawanda marudzi mune asina kukwana musana kukuvara tambo, uye hapana maviri akafanana.
Kukuvara kwakadai kunozivikanwa se Brown Sequard Syndrome, Central Cord Syndrome,Anterior Cord Syndrome uye Posterior Cord Syndrome.
Spinal Cord Kukuvara Kuvandudza
Kugadziriswa kwevanhu vane musana wekukuvara musana unobatanidza kurapa kwepanyama nemabasa ekuvaka-hunyanzvi. Izvi zviitiko zvinowanzoitika kunzvimbo yehunyanzvi senge musana wepelinha kukuvara rehabilitation Center or musana wekukuvara nzvimbo. Dare rekuvandudza rinowanzo tarisa zviitiko uye rinosanganisira chiremba anoongorora kukuvara kwemuzongoza, vashandi vezvemagariro, varapi vemuviri uye vezvekuita basa, varairidzi vemitambo, vanamukoti vekuvandudza, vanachipangamazano vezvepfungwa, vanachipangamazano vezvekudzidzisa uye vezvehutano.
Kazhinji, a akaremara ndichave muchipatara kwemwedzi mishanu, uko se quadriplegic Unogona kunge uri muchipatara kwemwedzi mitanhatu kusvika misere. Vaviri vakaremara uye quadriplegics vanofanirwa kuve nerudzi rwekugadzirisa uye physiotherapy vasati vaburitswa muchipatara, kubatsira kuwedzera kugona kwavo, kana kuvabatsira kujaira hupenyu pawiricheya, uye kubatsira kudzidzisa maitiro anoita kuti hupenyu hwezuva nezuva huve nyore.
Akaremara mitambo, uye wiricheya based mitambo inogona kuve nzira yakanakisa yekuvaka kusimba, uye kubatsira mukugadzirisa nekupa kuvimba uye hunyanzvi hwemagariro. Mubairo wekupedzisira wevazhinji vakaremara vemitambo nevakadzi, ndiko kuhwina pa mitambo yeparalympic, iyo ichave ichiuya kuLondon muna 2012.
Spinal Cord Kukuvara Kurapa uye Kurapa
Mushonga wekuremara kwenguva yakareba uchiri mamwe makore mune ramangwana, asi zvipatara zviedzo zviri kutora nzvimbo olfactory ensheathing glial (OEG) masero uye embryonic stem cell yakavakirwa kurapwa.
Quadraplegic, Tetraplegic, Paraplegic uye its Definition
Quadraplegic inotorwa kubva pamazwi maviri akapatsanurwa kubva mumitauro miviri yakasiyana, chiLatin nechiGiriki. Izwi rekuti "Quadra", zvichireva "zvina" iro rinotorwa kubva muchiLatin, rinoenderana nenhamba yemitezo. "Plegic", rinobva pashoko rechiGiriki rekuti "Plegia", zvichireva kuremara.
Isa izvo zviviri pamwechete, uye une "Quadraplegia".
"Tetra" yakabva pazwi rechiGiriki rekuti "Vane". "Para" rinobva pashoko rechiGiriki rekuti "vaviri" Saka: Tetraplegic uye Paraplegic.
MuEurope, izwi rekuti 4 mitezo yekufa mitezo yagara iri tetraplegia. VeEuropean havangamborote vachibatanidza mudzi wechiLatin uye wechiGreek mune rimwe izwi.
Muna 1991, apo American Spinal Cord Injury Classification system yaive ichiongororwa, kududzirwa kwemazita kwakakurukurwa. MaBritish vanoziva mazita echiGiriki kana echiLatin. Sezvo Plegia riri izwi rechiGiriki uye quadri chiLatin, izwi rekuti quadriplegia rinosanganisa masosi emitauro. Pakuongorora zvinyorwa, zvakakurudzirwa kuti izwi rekuti tetraplegia rinoshandiswa neAmerican Spinal Cord Association kuitira kuti pasave nemazwi maviri akasiyana muchiRungu achireva chinhu chimwe chete.
Ndeapi masimba akamira mawiricheya ari nani?
Manual propel simba kumira isarudzo kune avo vanoda kukwanisa kuramba vakashinga mukuzvifambisa. Simba rekumira sarudzo inoshanda seyunobatsira uye inobatsira munhu kusimuka. Yako PT inofanirwa kushanda neATP yako kana ekurapa kuti uone kana iro rakawedzera simba rekufamba uye simba ELR kana kukwidziridzwa kwekuzorora kwegumbo uye kutenderera mashandisiro ari ekurapa anodikanwa kwauri. Ehezve kana bhajeti ichibvumidza, idzi sarudzo dzinogona kugara dzichibatsira kune mumwe munhu anoda kuwedzerwa rubatsiro uye rubatsiro. KuKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru emawichecha emawoko ekusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa pawiricheya, iwe uchazoda iyo yakareruka kupfuura yakasununguka wiricheya iripo. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nechigadzirwa uremu uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako: